Madaxweynaha Faransiiska oo Muslimiinta Dalkaasi Uhanjabay | Gaaroodi News
Madaxweynaha Faransiiska oo Muslimiinta Dalkaasi Uhanjabay
Faransiiska waxaa ku nool tirada muslimiinta ugu badan
Mabaadiida adag ee dalka Faransiiska oo cilmaaniyadda ama laïcité, ku dhisan sharciga wuxuu kala soocayaa dowladda iyo hay’adaha diiniga ah. Fikraddaa ayaana dhigaya dadyowga diimaha iyo caqiidooyinka kala duwan aaminsan iney sharciga hortiisa ka siman yihiin. Qorshayaasha Mr Macron waxaa ka mid ah in si dhow loo baaro iskuulada gaarka loo leeyahay ee muslimiinta
Dalka Faransiiaka ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay dal ku yaalla galbeedka Yurub oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan.
Cabashooyin badan oo muslimiinta ku aaddan oo ay soo jeedinayaan cilmaaniyiinta ayaa waxay mas’uuliyiinta dowladda kaga codsadaan inay si gaar ah u beegsadaan arrimaha muslimiinta sida mamnuucidda xijaabka.
Mr Macron oo Jimcihi ka hadlayey meel ka baxsan magaalada Paris ayaa sheegay Muslimiinta xagjirka ah iney faransiiska khatar ku yihiin maadaamaa ay iyagu leeyihiin sharci u gaar ah oo bulshooyinka Faransiiska kala qaybinaya.
“Diinta Islaamka dunida oo dhan ayey maanta dhibaata ku tahay, mana dooneyno iney taa dalkeenna ku aragno” ayuu yiri Mr Macron.
Tallaabbooyinka uu madaxweyne Macron la damacsan yahay muslimiinta Faransiiska waxaa la filayaa dabayaaqada sanadkan inuu baarlamaanka dalkaasi horgeeyo
Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa doonaya 2022 in markale madaxweynanimo loo soo doorto
Mr Maccron waxaa kale uu sheegay Faransiiska inuu waxbadan ka qabanayo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dadka soo galootiga ah, wuxuuna intaa ku daray iney xagjiriintu ay buuxiyeen fursadihi jiray.
Toddobaadki hore laba qof ayaa la dhaawacay kaddib marki weerar lagu qaaday xafiiski hore ee wargeyska Charlie Hebdo ee lagu aflagaaddeeyey Nabi Muxammad (NNKH)
Bishii January 2015-kina kooxaha jihaad doonka ah weerar ay xafiiska wargeyska Charlie Hebdo ku qaadeen waxaa lagu dilay 12 qof, iyaga oo kooxaha weerarkaasi soo qaaday ay sheegeen iney wargeyska weerarkaasi ugu qaadeen si ay ugu aarsadaan aflagaaddada Nabi Muxamad (NNKH) uu u geystay